Wasiir Jamaal oo jawaab kulul siiyay xildhibaanka UK ee wada doodda aqoonsiga Somaliland | dalkaan.com-Wararka ugu danbeeyay ee soomaaliya
Home Warkii Wasiir Jamaal oo jawaab kulul siiyay xildhibaanka UK ee wada doodda aqoonsiga...
Wasiir Jamaal oo jawaab kulul siiyay xildhibaanka UK ee wada doodda aqoonsiga Somaliland
Muqdisho (Dalkaan.com) – Wasiirka qorsheynta xukuumadda federalka Soomaaliya, Mudane Jamaal Maxamed Xasan ayaa si adag ugu jawaabay xildhibaan xildhibaan Gavin Williamson oo ahaa xildhibaankii barlamaanka UK horgeeyay mooshinka looga doodayay aqoonsiga Soomalailand.
Jamaal oo ka jawaabay qoraal Gavin Williamson uu soo dhigay bartiisa twitter-ka, ayaa waxa uu ku weeraray shaqsiyada Gavin, si adagna uga horyimid in uu soo fara-geliyo arrimaha gudaha dalkeena.
“Tani waxay dhab ahaantii muujinaysaa jaahilnimadaada ku aadan xaaladda gudaha ka jirta. Qof si sharaf dhac leh looga ceyriyay shaqadii uu dowladdiisa u hayay ka dib markii uu dusiyay sirar la xirriira amniga qarankiisa ma aha inuu farageliyo arrimaha gudaha ee dal madaxbanaan,” ayuu ku yiri qoraalkiisa Wasiir Jamaal.
Xildhibaan Gavin Williamson oo dooda u soo bandhigayay xubnaha aqalka baarlamaanka ayaa sheegay in la joogo xilligii ay UK aqoonsan lahayd Somaaliland, isagoo hadal kasoo yeeray Wasiirka arrimaha Afrika ee UK Vicky Ford ku tilmaamay in faham la’aan ka haysato xaqiiqda jirta.
Vicky Ford ayaa ku dhawaaqday in aqoonsi ay hesho Somaliland uu yahay mid ku xiran dowladda federaalka Soomaaliya, oo ay tahay inay Somaliland ka wada-hadlaan, xilli baarlamanka dalkaas shalay la geeyey dood ku saabsan aqoonsiga Somaliland.
“Doodda ka socota Aqalka Wakiilada waxay hoosta ka xariiqeysaa mowqifka joogtada ah ee UK ee ku wajahan maqaamka Somaliland. Waa arrin u taalla Somaliland iyo dowladda federaalka inay go’aan ka gaaraan mustaqbalkooda,” ayey Vicky Ford ku tiri qoraal ay soo dhigtay twitter-ka.
“Waxaan sii wadi doonaa in iskaashi kala sameyno dowladda federaalka Soomaaliya iyo Somaliland arrimaha dimqoraadiyadda, ammaanka iyo barwaaqada.”
Hadalka Vicky Ford ayaa soo xiray dooddii qabsatay baraha bulshada iyo rajadii Somaliland ee ay aheyd in doodda la geeyey baarlamanka UK ay hoggaamin karto aqoonsi ay hesho Hargeysa.
Sidoo kale waxa uu yimid hadalka Vicky Ford saacado un kadib markii ay wada-hadallo la yeelatay wasiirka arrimaha dibedda Soomaaliya Cabdi Saciid Muuse Cali, kaasi oo ku aadana ixtiraamka midnimada iyo madax-baannaanida Qarannimo ee labada Dal.
Si kastaba, dowladda federaalka Soomaaliya ayaa xilligan marnaba ogoleyn in Somaliland loo aqoonsado dal madax-banaan, ayada oo uu gaabis weyn ku yimid wada-hadaladii u dhaxeeyay labada dhinac.
Guddiga doorashada ee guddoonka BF oo hab beeleed loo soo xulayo,...
Muqdisho (Caasimada Online) -Kalfadhiga 1-aad kulankiisa 1-aad ee Golaha Shacabka Soomaaliya ayaa maanta si rasmi ah uga furmay magaalada Muqdisho, kaas oo uu shir...
Beesha leh mid ka mid ah afarta kursi ee dib loo...
Yuusuf Garaad oo shaaciyey arrin looga gudbi karo khilaafka dalka
Madaxweynaha oo JAWAAB deg deg ah kasoo saaray go’aankii Biden ee...
Burkina Faso 1-3 Senegal: Mane oo shabaqa soo taabtay iyadoo Libaaxyada...
Wararkii ugu dambeeyey duqeymaha Kenya ee Gedo
Somaliland oo Mareykanka u yaboohday laba waxyaabood si ay uga beddelato...
Renato Sanches oo ku Cadaadinaya Kooxdiisa inuu dhaqaaqo Janaayo xilli Arsenal...
Xog: Magacyada lix sarkaal oo NISA ka tirsan kuna biiray BF...